ရေစိုပျက်စီးသွားတဲ့ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြင်မလဲ?? – DigitalTimes.com.mm
10 Shares 874 Views
ဖုန်းတစ်လုံးရေကန်ထဲ ဒါမှမဟုတ် အိမ်သာခွက်ထဲကျပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲက ကောင်းစရာတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ LG G6 တို့ Samsung Galaxy S8 တို့လို ရေစိုခံဖုန်းတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပျက်သွားဖို့ရာ အလားအလာပိုများပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများ ရေစိုခံနိုင်မှုကို ဦးစားပေးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ ဇိမ်ခံပစ္စည်းသက်သက် အပိုတွေပါလို့တွေးနေရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ရေထဲကျတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုခံစားလိုက်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုတ်ကျဖူးလို့ သိပါတယ်။ ဒီတော့ ရေစိမ်ဖို့မှမဟုတ်တာလို့ တွေးရမှာမဟုတ်ဘဲ တကယ်ရေထဲကျတဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာမရှိဖို့ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မတော်တဆအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေထဲဆင်းရမယ့် ရေနဲ့ထိတွေ့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ ရေစိုခံအိတ်ထဲထည့်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မထားရင် သင့်အပြစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါဆို တကယ်လို့ရေထဲကျသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ဖုန်းရေထဲကျပြီဆိုတာနဲ့ အမြန်ကောက်ပြီး ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါ
ရေထဲကျပြီဆိုတာနဲ့ အမြန်ကောက်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းက ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တောင် ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ဖုန်းဘက်ထရီဖြုတ်လို့ရရင်ဖြုတ်ထားပြီး မရရင်ပိတ်သာထားလိုက်ပါ။
ကောင်းတာတစ်ခုက ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေက ရေစိုခံဖုန်းမဟုတ်ရင်တောင် ဟိုးအရင်ကဖုန်းတွေထက်စာရင် ရေစိုဒဏ်နည်းနည်းတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုမဆိုးအောင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ…..
– ခုနကပြောခဲ့သလို ဖုန်းကိုမဖွင့်ပါနဲ့။ ရေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေ ကောင်းကောင်းပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
– အားလည်း မသွင်းပါနဲ့။
– ဘယ်ခလုတ်ကိုမှမနှိပ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ ဖုန်းထဲကို ရေတွေပိုစိမ့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
– ဖုန်းကို လှုပ်ခါတာမျိုးတွေ ဖုန်းထဲကိုလေမှုတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကလည်း ဖုန်းရဲ့ ဟိုးအတွင်းပိုင်းထဲထိ ရေပိုရောက်စေသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
– ဖုန်းကို ဘာအပူမှမပေးမိပါစေနဲ့။ အပူပိုများလေ ဖုန်းကိုပိုပျက်စီးစေဖြစ်မှာပါ။
– ဖုန်းကို သိပ်ပြီး နေရာမရွှေ့ပါနဲ့။ အထဲမှာ ရေတွေပိုပြန့်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဖြုတ်သင့်တာဖြုတ်ပါလို့ပဲပြောတာပါ။ တစ်စစီဖြုတ်ပစ်လိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ဖြုတ်နိုင်သမျှအရာတွေ ဥပမာ အဖုံးဖြုတ်လို့ရရင် အဖုံး၊ ဘက်ထရီဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင် ဘက်ထရီ၊ SIM ကဒ် SD ကဒ် ဒါတွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ အကုန်လုံးကို စက္ကူပေါ်မှာ တင်ထားပါ။
တကယ်လို့ သင်ကနည်းပညာကို နားလည်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိတဲ့သူဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်တစ်စစီဖြုတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့တစ်ပိုင်းချင်းစီက မြန်မြန်ခြောက်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မလုပ်တတ်ရင်ပိုဆိုးသွားနိုင်တာမို့ သတိထားရမှာပါ။
ဖုန်းရဲ့အပြင်ပိုင်းကို စာရွက်နဲ့ တစ်ပိုင်းချင်းစီသေချာခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးမလှုပ်ခါစေဘဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုင်တွယ်ပြီး ခြောက်သွေ့ပါစေ။
စက္ကူနဲ့သုတ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ ခုနက ဖုန်းထဲကိုလေထည့်မမှုတ်ဖို့ပဲ ပြောတာပါ။ ဖုန်းထဲကရေကို ထွက်လာအောင် စုပ်ထုပ်လို့တော့ရပါတယ်။ ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ဆိုရင် အန္တရာယ်လည်းသိပ်မများ ရေလည်း အနည်းအကျဉ်းတော့ထွက်လာမှာပါ။ တတ်နိုင်ရင်တော့ ပုံမှာပြထားသလို ဖုန်စုပ်စက်ကြီးကြီးကိုသာသုံးပေးပါ။
အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းက အခုမှစပါပြီ။ ဒါကတော့ သင့်ဖုန်းကို မထိမကိုင်မသုံးဘဲ အချိန်တော်တော်ကြာထားရမှာပါ။ သူများဆီကဖုန်းငှားလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ SIM ကဒ်ကို လုံးဝခြောက်ပြီဆိုမှထည့်သုံးပါ။
ဒါဆိုဖုန်းကိုဘယ်လိုခြောက်အောင်လုပ်မလဲ?? တချို့တွေက ဖုန်းအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အံဆွဲထဲ စာပွဲပေါ် ဒီတိုင်းပစ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ဘဲ ဖုန်းကိုခြောက်သွေ့စေဖို့ ဆန်အိတ်ထဲ ၂ရက် ၃ရက်လောက် ထားထားပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆို ဘာလို့ဆန်ကိုသုံးရတာလဲ??? ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်တိုင်းမှာအလွယ်တကူရနိုင်တာ ဆန်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဆန်ဆိုတာ လေထဲကစိုထိုင်းမှုကို စုပ်ယူတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါဆိုဖုန်းလည်း ခြောက်သွားမှာပါ။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဂျယ်လုံးအိတ်လေးတွေပါ။ ဖိနပ်တွေ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဘူးတွေမှာ ပါတတ်တဲ့ စားလို့မရတဲ့ အလုံးလေးတွေပါ။ သူကလည်း ခြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့နေရာမှာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
ရက်နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာ ဖုန်းကိုထားထားတဲ့နေရာကနေထုတ်ပြီး အကုန်ပြန်တပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ အားသွင်းပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါ။ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုအောင်မြင်သွားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ မူမမှန်ဘူးထင်တဲ့အပိုင်းတွေကို ရှာနေပါ။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ တစ်ခုခုဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ မိုက်ခရိုဖုန်း earphone ကောင်းမကောင်းသိရအောင် ဖုန်းခေါ်ကြည့်ပါ။ စပီကာတွေကိုလည်း စမ်းကြည့်ပါ။
တကယ်လို့ ဖုန်းကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကိုသာ သွားပြရတော့မှာပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းများ